Vaovao - Ahoana no fiasan'ny kitapo sivana
Ahoana ny fiasan'ny kitapo sivana
Kisary scématika ho an'ny sivana kitapo
Vovon-kitapo tokana mpanangona vovoka (Fizarana fizarana)
tsipika feno sivana Bag dia manolotra vahaolana mahomby sy mahomby amin'ny fanadiovana ny rivotra avy amin'ny vovoka, ateraky ny fizotran'ny zavamaniry, silo fitehirizana, fitoeram-pako, mixer, fanamainana, conveyor Belt, efijery sns. Ny rivotra miaraka amin'ny vovoka dia afaka mamokatra asa tsy mahafinaritra na mampidi-doza aza. tontolo iainana.
Ny sivana kitapo dia nanampy tamin'ny fanodinana zavamaniry misy fifehezana ny tabilaon'ny fanaraha-maso ny loto amin'ny alàlan'ny fifehezana ny fahalotoan'ny zavamaniry sy ny tontolo iainana. Ho fanampin'izany, ireo rafitra ireo dia manampy amin'ny fampihenana ny loza ateraky ny asa.
Fitsipika miasa amin'ny sivana kitapo
Ny rivotra miaraka amin'ny poti-vovoka ao anaty suction na tsindry dia miditra amin'ny faritra ambany dia ny hopper an'ny sivana kitapo.
Ny rivotra dia mamakivaky ny kitapo sivana, izay mitazona ireo vovoka vovoka ambonin'ilay kitapo, ary ny rivotra madio dia mivoaka amin'ny alàlan'ny kitapo sy plenum mankany amin'ny fivoahan'ny sivana Bag.
Ny vovoka dia angonina eo ivelan'ny sivana kitapo
Ny fanangonana vovoka amin'ny kitapo dia miteraka fiakaran'ny tsindry tsy mitovy amin'ny kitapo sivana. Ny rivotra voafintina dia voan'ny pulse pulse pulp vita amin'ny tsimok'aretina mihidy amin'ny elanelam-potoana mialoha ka mahatonga ny valves hisokatra.
Ny rivotra tampoka tampoka (4-5 bar) dia mikoriana avy eo amin'ny lohan-tseranana voafintina mankany amin'ny fantsom-pamonoana ary roahina amin'ny fantsom-pamokarana amin'ny alàlan'ny fantsom-pandehanana (hafainganam-pandehan'ny rivotra). Ny rivotra avy isaky ny noza dia miteraka fikorianan'ny rivotra faharoa. Ny vokatra mitambatra amin'ny rivotra faharoa sy voalohany dia miteraka fiakaran'ny tsindry avy hatrany amin'ny lafiny madio amin'ny kitapo sivana, ka mahatonga ny rivotra miverimberina amin'ny alàlan'ny kitapo sivana, ka manala ireo potipotika vovoka mitazona eo ambonin'ny atin'ny kitapo.
Amin'ity mekanisma ity, ny vovoka nangonina dia navotsotra avy tany anaty kitapo ary latsaka tao anaty hopper ary ny tsindry tsy mitovy dia voafehy manerana ny Bags Filter.
Avy amin'ity hopper ity dia mivoaka amin'ny alàlan'ny fitaovana mety, izany hoe valizy Rotary.
Satria ny ampahany amin'ny faritra sivitr'isan'ny sivana kitapo ihany no diovina amin'ny fotoana rehetra, azo antoka ny fikorianan'ny kitapo amin'ny kalitaon'ny isa.
Endri-javatra amin'ny Rafitra fanangonana vovoka
FIASANA MAHOMBY Volavola mifanaraka amin'ny fenitra American Ventilation System
Kitapo sivana avo lenta.
Emission azo antoka latsaky ny 50 mg / Nm3 araka ny Application
Ny tahan'ny rivotra-to-lamba (A / C) tsara indrindra
Optimum can Velocity ho an'ny filtration mahomby
Famaritana mahomby amin'ny fotoana mikapoka amin'ny ora fanadiovana
Ny elanelam-bidin'ny optimum
Fotoana fandefasana: Apr-08-2021